Furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare oo shalay uun la shaaciyay oo maanta dib loo dhigay – Kalfadhi
Furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare oo shalay uun la shaaciyay oo maanta dib loo dhigay
March 14, 2019 Kalfadhi
Maalin kadib markii la iclaamiyay waqtiga uu furmayo Kalfadhiga 5aad Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la sheegay in uu dib u dhac ku yimid waqtigii shalay la Iclaamiyay.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi u sheegay in dib loo dhigay Kalfadhigii Baarlamaanka ee furmi lahaa 16ka bishaan kuna beegan Sabtida soo aadan kadib markii loo sheegay in dalka uu imaanayo Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
“Dib ayaa u dhignay furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare, waxaan ka qayb qaadaneysaa soo dhowaynta Madaxweynaha Jabuuti”, ayuu Kalfadhi u sheegay Cabdi Xaashi C/llaahi Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa sheegay in ay dib ka sheegi doonaan xiliga uu furmayo Kalfadhiga Aqalka Sare balse hada maalmo kooban dib loo dhigay si looga qayb qaato soo dhowaynta Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
“Maalmo kooban ayaa dib u dhignay Munaasabada furtitaanka Kalfadhiga, dib ayaa ka soo sheegaynaa waqtiga ay dhacayso Munaasabadda”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi C/llaahi.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa todobaadkaan ku soo wajahan magaalada Muqdisho waxaana la sheegay in uu kulamo la qaadan Madaxda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in uu booqan doono Ciidamada Jabuuti ee ku sugan Soomaaliya.
Jabuuti dhow boqol oo Ciidamo ah ayaa ka jooga Soomaaliya kuwaas oo ka qayb qaadanaya Howlgalka Nabad soo celinta Soomaaliya ee AMISOM, waxayna ka howlgalaan Ciidamada Jabuuti Gobalka Hiiraan ee Bartamaha Soomaaliya.
Xildhibaan Jeesow oo ka digay colaad sukeeye oo ka dhalata odayaal lagu xiray Kismaayo
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo ka hadlay xiisadda dagaal ee gobolka Sanaag